February 4, 2020 - MM Live News
မိသားစုပွိုကှဲပွီး အသကျပါပေးလိုကျ ရတဲ့ ကနြေျာ့သူငယျခငျြး (ဖွဈရပျမှနျ )
February 4, 2020 MM Live News
တကယ်ရှိတယ် Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက် ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီး သွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messenger လေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူးး။ ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာ Fbဆိုတဲ့ ဆိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိ တာ မရှိတာ နားမလည်ကြပဲ ဒု သ န သော ဆိုတဲ့ အပြစ်ကို လူမသိ သူမသိ တချို့တွေ ကျူးလွန် နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းးအကြောင်းးဆက်ရအောင်….. သူ့နာမည် ကျော်မြင့် သူတို့မိသားစုက ဝန်ထမ်းတွေပါ….သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်…..ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ…. သူ့မိန်းမ Fb သုံးရင်းနဲ့ ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့စပြီး ခင်ပါတယ်….. အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားပါ….” […]
သူမြားတှေ သိကုနျပွီ ကိုယျသိဖို့ပဲ လိုတော့တယျ…
သူများတွေ သိကုန်ပြီ ကိုယ်သိဖို့ပဲ လိုတော့တယ် ဒီနေ့ ဘီဘီစီ သတင်း ဖတ်ရင်း က စိတ်ဝင်စား စရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖြစ် ပါတယ်။ အင်္ဂလန် မှာ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် နောက်ပိုင်း ခေတ် စား တဲ့ ဘဏ်ချေးငွေနဲ့ အိမ်ကြီးကြီး ကားကောင်းကောင်း တွေဝယ်ပြီး နေ တဲ့လူနေမှုပုံ စံက နေ တော်သင့် သလောက်အိမ်လေး ရယ် မရှိမဖြစ်လို မှဝယ် တဲ့ ဂျပန် ကားလေး ကိုစီး ပြီး အကြွေးမထူ လူမပူ ရဘဲ ခပ်အေးအေး နေ တဲ့ပုံစံ ကို ပြောင်း လဲလာပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီလို ကြွားဝါ ရမဲ့ကိစ္စ တွေ မှာ […]
ကိုကိုယျတိုငျတောငျ ပွနျငယျသှားခငျြမိတဲ့ မိုးရထေဲက အတုယူစရာကောငျးတဲ့ လူငယျတဈယောကျရဲ့လုပျရပျ…
“ထီးမပါတဲ့ကလေးဟာ မိုးထဲလေထဲမှာ ပိုအပြေးမြန်တတ်ပါတယ်” ဖခင်ဖြစ်သူ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ချေးယူလာတဲ့ ၄၅၃၃ ယွမ် ( ကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်းခန့် ) သားလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ အဲဒီပိုက်ဆံကို တုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ လက်ခံလုိုက်ပါတယ်။ သားဖြစ်သူ သိလိုက်တယ်။ ကျောင်းလခ ယွမ်ငွေ ၄၁၀၀ ကျပ်သွင်းပြီးရင် စားဖို့နေဖို့အတွက် ၄၃၃ ယွမ်သာကျန်ပါတော့မယ်။ ဘယ်လိုခရီးဆက်သွားရမလဲ။ ဖခင်ဖြစ်သူ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးပြီဆိုတာ သူကောင်းစွာနားလည်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရစရာလမ်း ဒီထက်မပိုနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ “ဖေဖေ စိတ်ချပါ။ ကျနော့မှာ ခြေတွေလက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။” အဖေ့ကို ပြန်နှစ်သိမ့်ရပါတယ်။ ၀မ်းနည်းပူဆွေးပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖခင်ဖြစ်သူကို သူပြုံးပြီးနူတ်ဆက်ပါတယ်။ နူတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ အိမ်ထဲကနေ တစ်ချိုးတည်း ထွက်လာပါတော့တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို လှည့်ပြီး သူထွက်ခွာလာတဲ့အခိုက်မှာ မျက်ရည်တွေ မျက်နာတစ်ပြင်လုံး ယိုဆင်းလာပါတယ်။ […]
သငျ သတိမထားမိနိုငျသော သငျ့အနားက စိတျဝငျစားစရာလေးတှေ သငျသိရငျ မကျြလုံးပွူးသှားမယျ
သင့်သတိမထားမိနိုင်သော နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျင်းဘောင်ဘီရဲ့ အိပ်သေးသေးလေးတွေအကြောင်းနဲ့ စပါကတီဇွန်းတွေမှာ အပေါက်လေးတွေပါဝင်နေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပီးနောက်မှာတော့ အခြားကျန်ရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေထဲက တချို့တ၀က်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမှာပါ။ ၁။ Pen Lids သင် သတိမထားမိနိုင်သော သင့်အနားက စိတ်ဝင်စားစရာ ဒီအရာလေးတွေ သင်သိရင် မျက်လုံးပြူးသွားမယ် သင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြဘောလ်ပင် အဖုံးလေးတွေမှာ သင်တွေ့မြင်နေကြအရာလေးရှိတယ်။ တချို့ကစဉ်းစားနေချိန်နဲ့ တခြားအချိန်တွေမှာ ဘောလ်ပင်အဖုံးကို ကိုက်တတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့် အမေရိကားမှာ နှစ်စဉ်လူ ၁၀၀ထက်မနည်း သေဆုံးနေရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမှတ်မထင်မျိုချမိလို့ပါတဲ့။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ ဘောလ်ပင်အဖုံးလေးတွေရဲ့ထိပ်မှာ အပေါက်လေးတွေကို တွေ့လာရပီး သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အမှတ်မထင်မျိုချမိပါက အသက်ရှုမရတဲ့အခြေအနေကို အနည်းနဲ့အများအထောက်အကူဖြစ်အောင်ပါတဲ့။ ၂။ Traffic Lights သင်မီးပွိုင့်က မီးလုံးအရောင်လေးတွေနဲ့တော့ ရင်းနှီးနေမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထိုအရောင်တွေဘယ်က […]
လူမုနျးရငျ ရှောငျလို့ရတယျ….ကံမုနျးရငျ ရှောငျလို့မရပါဘူး….
လွတ်မယ်ထင်လား ဟိုတလောက သတင်းတခုဖတ်လိုက်ရတယ် စက်လှေမှောက်တာ လူဆယ်ယောက်အနက် ရှစ်ယောက်က ရေနစ်သေသွားတယ်တဲ့ …. နှစ်ယောက်က ရေကူးပြီးသစ်ပက်ပေါ်တက်သွားတာ အဲဒီနှစ်ယောက်ပါ သစ်ပင်ပေါကမြွေကိုက်လို့ သေသွားသတဲ့….. အခုလည်း အဲဒီလိုဖြစ်နေပြီ….. ဝူဟမ်ရောဂါပိုး ပျောက်အောင်ကုနိုင်ပြီလို့ အမေရိကန်က ကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ပဲ…. အခုတခါ တရုတ်မှာ ကြက် ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးအသစ် ထပ်ဝင်နေပြီတဲ့…. လေထဲပျံနေတဲ့ ကျီးကန်းကြီးမီးလောင်သေတာ အံ့သြစရာထင်ရပေမဲ့….. သူလယ်လုပ်တုံးက နွားတကောင်ကို မီးကွင်းစွပ်ပြီး သတ်ခဲ့တာသိရရင် အံ့သြစရာမရှိပါဘူး…. ပဋာစာရီဟာ မိဘတွေသေ လင်မြွေကိုက် သားရေနစ် စွန်ချီ ခံရတာ ပကတိမျက်လုံးနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ အံ့သြစရာပေါ့ …. ဒါပေမဲ့ သူ့ ရဲ့အတိတ်ဘဝက သူ့ ကိုဓါးပြတိုက်သူသတ်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို ငါ့မျက်စိရှေ့မှာပဲ အသေဆိုးနဲ့ သေပါစေ ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းကို သိရင်တော့ […]
ဖားကနျ့တှငျ မီးငွှိမျးသတျနသေောတပျဖှဲ့ဝငျမြား၏ ဆိုငျကယျ ငါးစီး ခိုးယူခံရ…
February 4, 2020 February 4, 2020 MM Live News
ဖားကန့်တွင် မီးငြှိမ်းသတ်နေသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆိုင်ကယ်ငါးစီး ခိုးယူခံရ 4, February , 2020 ဖားကန့်တွင် မီးလောင်နေသည်ကို ငြှိမ်းသတ်နေသည့်မီးသတ်နှင့် ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင် များ၏ ဆိုင်ကယ်ငါးစီးပျောက်ဆုံး မှု ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် ညက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေး ရွာအုပ်စု မှော်ရှန်ကျေးရွာတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် ညက မီး လောင်ခဲ့သည်။ ‘‘မီးသတင်းရရချင်း ကျွန် တော်တို့က ရောက်ရာနေရာက နေ အပြေးအလွှား သွားငြှိမ်းသွား ပေးတာ။ မီးလည်းငြိမ်းရော ဆိုင် ကယ်တွေ မတွေ့တော့ဘူး’’ဟု ဖားကန့်မြို့နယ် ကြက်ခြေနီတပ် ဖွဲ့မှ ဦးသိန်းဟန်က ပြောသည်။ ဖားကန့်မြို့နယ် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ပိုင်သော ဆိုင်ကယ်သုံးစီးနှင့် ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့မှ နှစ်စီး၊ […]
ပွောခငျြတာက ဘာလို့ အဲ့ဒီလို လုပျကွတာလဲ….
၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ရန်ကုန် က ပြည် ကို ရထားနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တွေက တွဲ ၅ မှာ။ဝါးနက်ချောင်းဘူတာအလွန်…ဖူးကြီးဘူတာရောက်ခါနီး ၁၀ မိနစ်ကျော်ခန့်အလို(၅)မိုင်လောက်မှာ ရထားကို ခဲနဲ့ထုလို့ ကိုယ့်ရှေ့က ကလေးမလေး မျက်ခုံးကွဲသွားတယ်။ ၅ မိနစ်လောက်နေပြီးမှ သိရ တော့ အချိန်က နောက်ကျလို့ ရထားက တော်တော် လွန်သွားပြီ။တွဲစောင့်ကိုခေါ် မီးရထားရဲကို အကြောင်း ကြားပြီး ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်ခိုင်းရတယ်။ သူတို့ လဲ အရေးတယူ လုပ်ပေးကြပါတယ်။ တွဲ ၁ မှာလည်း အပေါက်ခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ပံတန်းမှာဆရာဝန်တက်လာပြီး စိတ်ချရလို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဘာလို့ အဲ့ဒီလို လုပ်ကြတာလဲ။ ဘာအကျိုးအမြတ် ရကြလို့လဲ။ မတော်လို့ မျက်လုံးထိရင် ကိုယ်အဂ်ါ ချို့တဲ့သွားမယ်။ ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး […]
မတျောတဆ လညျခြောငျးမှာ ငါးအရိုးစူးလြှငျ ဒါတှလေုပျ လိုကျပါ…
မတော်တဆ လည်ချောင်းမှာ ငါးအရိုးစူးလျှင် ဒါတွေလုပ် လိုက်ပါ… ငါး အရိုးမျက်လျှင် အတော့်ကို ခံစားရခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားပေမယ့် အခန့်မသင့်လျှင်ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေခွဲထုတ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါးအရိုးမျက်လျှင် အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ် တွင်းကုထုံးလေးများကို ရသမျှစုစည်း၍ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေရာနည်းကို ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ (၁) သံပုရာသီးကို အခွံမာများခွါ၍ အလုံးကို သွားကြားထိုးသံဖြင့် အပေါက်လေးများ ထိုးဆွထား၍ခေတ္တမျ ငုံထားပါ။ အရည်ကို တဖြေးဖြေး မျိုချပေးပါ။ အချဉ်ဓါတ်က ငါးရိုးများကိုတိုက်စားသွားပေလိမ့်မည်။ (၂) ငှက်ပျောသီး စားပါ။ ဘာငှက်ပျောသီးဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါသည်။ (၃) ကြက်ဥအကာကို သောက်ပေးပါ။ ငါးရိုးသည်အချွဲများနှင့်အတူ ကျသွားမည်။ (၄) သံပုရာသီး သို့မဟုတ် သံပုယိုသီးကို ၄ စိတ်ခွဲ၍ ပါးစပ်ဟကာ […]
လူဆယျယောကျကိုဖွနျ့ဝပေေးပါက လူတယောကျ၏ အသကျကို ကယျနိုငျ ကောငျးတယျ လို့ဆိုပါတယျ…
လူဆယ်ယောက်ကိုဖြန့်ဝေပေးပါက လူတယောက်၏ အသက်ကို ကယ်နိုင် ကောင်းတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ကျမ လုပ်ရမယ့် အပိုင်းကိုတော့ ကျမလုပ်ပြီးပြီ ။ သင့်အပိုင်းက်ို သင်လုပ်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သံပယိုရည်နဲ့ ရေနွေးကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သကြားကို မထည့်ပါနဲ့။ ပူနေတဲ့သံပယိုရေနွေးဟာ အေးနေတဲ့ သံပယိုရည်ထက်ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ကဇွန်းဥ အဝါနဲ့ခရမ်းရောင်တို့မှာလည်း ကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အရာကောင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ၁။ ညနှောင်းပိုင်း အစားအစာစားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်နိုင်ခြေများစေပါတယ်။ ၂။ တပတ်တွင် ကြက်ဥ (၄) လုံးထက်ပို၍ မစားမိပါစေနဲ့။ ၃။ ကြက်အဆီဘူးကို စားခြင်းဟာ အစာအိမ်ကင်ဆာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ၄။အစာစားပြီး အသီးကို မစားပါနှင့်။အသီးကို အစာမစားမီ စားသုံးပါ။ ၅။ ရာသီလာချိန်တွင် […]
ပဋ်ဌာနျးရှတျရငျ အဆငျမပွသေူမြားအတှကျ ကြှနျမကိုယျတှေ့ ဒီနညျးလေး မြှဝပေေးခငျြပါတယျ
ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် အဆင်မပြေသူများအတွက် ကျွန်မကိုယ်တွေ့ ဒီနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ….!ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် မိသားစုမှာ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေ ဖြစ်တယ်…. ဘာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေဘူး၊ စီးပွားရေးကျတယ်၊ လင်မယား ရန်ဖြစ်တယ်၊ သားသမီးတွေ ဆုံးမရတာ မလွယ်ဘူး၊ အိမ်မှာ ရွတ်လို့မရဘူး အိမ် စောင့်နတ် မခံနိုင်ဘူး၊ ဘုရားမှာရွတ်တယ်….. အသံတွေကြားရတယ်…အရိပ်တွေမြင်ရတယ်…. ပြီးအောင်ရွတ်လို့မရဘူး ….အနှောက်အယှက်တွေများတယ် စသည်ဖြင့် ပဋ္ဌာန်းရွတ်ရင် အဆင်မပြေသူများအတွက် ကျွန်မကိုယ်တွေ့ ဒီနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး နတ်ပင့်ရပါမယ်။ သမန္တာ စက္ကဝါဠေသု၊ အတြာဂစ္ဆန္တု ဒေဝတာ။ သဒ္ဓမ္မံ မုနိရာဇဿ၊ သုဏန္တု သဂ္ဂမောက္ခဒံ။ (ဓမ္မဿဝနကာလော အယံ ဘဒန္တာ။) ၃ခေါက် ဒုတိယက မေတ္တာသုတ် ရွတ်ရပါမယ်။ တတိယက ခွင့်တောင်းရပါမယ်။ ဘုန်းတော်အနန္တ၊ ဂုဏ်တော်အနန္တ၊ ကံတော်အနန္တ၊ ဉာဏ်တော်အနန္တ၊ […]